Liverpool Oo War Feecan Ka Heshay Dhaawaca Daafaceeda Virgil Van Dijk
Home Horyaalka Ingiriiska Liverpool oo war feecan ka heshay dhaawaca daafaceeda Virgil van Dijk
Daafaca dhexe ee Liverpool Virgil van Dijk ayaa lagu soo waramayaa inuu bilaabay ‘tababarka soo kabashada fudud’.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Netherlands ayaa lagu qasbay inuu maro qaliin bishii hore ka dib markii uu ka soo bogsaday jilibka muruqa bowdada intii lagu jiray tartan culus oo ka yimid Everton Jordan Pickford kulankii Merseyside derby.
Wararkii ugu horeeyay ayaa sheegaya in 29 jirkaan uu maqnaan doono inta ka dhiman xilli ciyaareedka 2020-21, laakiin sida laga soo xigtay Daily Mail , daafaca ayaa haatan qaadanaya xilli ‘tababar soo kabasho oo fudud ah.
Daafaca dhexe ayaa lagu soo waramayaa inuu weli wajahayo dagaal culus oo uu markale ku ciyaaro xilli ciyaareedkan, laakiin horumarkii ugu dambeeyay ayaa loo arki doonaa inay wax weyn u tahay kooxda heysata horyaalka Premier League.
Van Dijk, oo sidoo kale halis ugu jira inuu seego xulkiisa Netherlands ee Euro 2020, wuxuu ahaa shaqsi dhiirigelin u ah kooxda Jurgen Klopp tan iyo markii uu ka yimid Southampton sanadkii 2018.
Liverpool ayaa sidoo kale weyn doonta Joe Gomez inta ka dhiman xilli ciyaareedkaan, iyadoo daafaca uu soo gaaray dhaawac halis ah oo jilibka ah intii lagu jiray tababarkii England ee horaantii bishaan.
Previous articleWararka Xanta Suuqa kala iibsiga ee maanta Messi, Camavinga, Ramos, Alaba, James, Van Dijk, Wijnaldum
Next articleMacalin Jose Mourinho oo iska badalay Magacii Special One